Aug 19,2018 view 2043
Money Master (ငွေကြေးရဲ့သခင်) ချမ်းသာနည်း - ၇ ချက် (Tony Robbin) ကမ္ဘာ့ရောင်းအားကောင်းဆုံး စာရင်းဝင်ခဲ့သော Tony Robbin ရဲ့ Master of Money (7-Steps) Best Seller Book by Tony Robbin) စာအုပ်မှ (ငွေကြေးအရှင်သခင်) လမ်းညွှန်ချက်များကို ကိုးကားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ People make several mistakes when saving and investing for retirement, and one of the biggest ones is not getting started because they think they needalarge sum of money to begin, ပြည်သူတွေဟာ ချွေတာခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရာတွင် အမှားများစွာ လုပ်တတ်ကြပြီး အကြီးမားဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ စစခြင်းမရရှိနိုင်ဘူး အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့က စတင်ရန် ငွေအများကြီးလိုတယ်လို့ တွေးနေကြလို့ဘဲ။ Robbins advises people to educate themselves in investing. It's worth the time, and it'll pay off. "You master money, or it masters you," he says. Robbins developed what he calls the seven steps to financial freedom. ရော်ဘင်ဟာ လူသားတွေ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဘယ်လို ရင်းနှီး မြုပ်နှံသင့်သလဲဆိုတာကို နည်းပေးလမ်းညွှန်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ပေးဆပ်မှုအတွက် အချိန်ပေးရတာ ထိုက်တန်တယ်။ ငွေရဲ့ အရှင်သခင်ကသင်၊ သင့်ရဲ့အရှင်သခင်ကငွေ။ သူသည် ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှာဖွေမှုကို အချက်(၇)ချက်ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Step 1. Make the decision to become an investor, notaconsumer. ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ၊ ဖောက်သည်တစ်ယောက်ပုံစံတော့ မဖြစ်စေပါနဲ့။ "You don't want to own an Apple phone, you want to own Apple," he says. You have to commitacertain percentage of your income to savings for your financial freedom. Whatever that number is — 10%, 15% — stick to it in good times and bad. Have it taken automatically from your paycheck and put directly intoaretirement or savings account. သင် Apple ဖုန်းကို ပိုင်စရာမလိုဘူး Apple ကို ပိုင်ဖို့ဘဲလိုတယ်။ သင့်ရဲ့ ဘဏ္ဍရေး လွတ်လပ်မှုအတွက် ငွေစုရန် သင်၏၀င်ငွေမှ သေချာတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတော့ အပ်နှံရမည်။ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက်တော့ ၀င်ငွေကောင်းသည် ဆိုးသည် ဖြစ်စေ တစ်စိုက်မတ်မတ် စုသင့်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့လစာကနေ အလိုအလျောက် အငြိမ်းစား အကောင့် (သို့) ငွေစုအကောင့်ထဲသို့ ထည့်သွင်းစနစ်ကို လုပ်ဆောင်ရမည်။
Step 2. Become an insider on investing. ( ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင် အရေးပါသူတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ) Know the rules of the game. Understand mutual funds and learn what mutual funds beat the market or their benchmark over any 10-year period. Look into the fees you are paying on mutual funds and how that affects your financial future. ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းကို အားလုံး သိပြီးသာဖြစ်မှာပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မည့် နည်းလမ်းကို သဘောပေါက်နားလည်ပြီး ဈေးကွက် အတွင်း ရိုက်ခတ်နေသော အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို သင်ယူပါ (သို့) လာမည့် (၁၀)နှစ်တာကာလရဲ့ ဈေးကွက် စံနှုန်းကို ယူပါ။ သင့်အတွက် အပြန်အလှန်အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မှုပေါ် ရင်နှီးခြင်းဖြင့် ဒါတွေဟာ မိမိရဲ့ အနာဂတ် ဘဏ္ဍာရေးအတွက် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ သက်ရောက်စေလဲဆိုတာကို လေ့လာစူးစမ်းပါ။
Step 3. Make the game winnable. (ပြိုင်ပွဲတိုင်း အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါ။) "Most people haveanumber that's so big that they never begin the journey," Robbins says. Figure out how much money you need for financial security and financial independence. Calculate this and come up withaplan. Look for places you can save more. လူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို စတင်လိုက်သည့်ခါ ကြီးမားသော ကိန်းကဏန်းတစ်ခုရှိပြီးသား။ သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေ မှီတည်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာငွေ လုံလောက်ရေး အတွက် လိုအပ်သောငွေပဏကို ရအောင်လုပ်ဆောင်ရန်။ အစီစဉ်တကျတွက်ချက်ပြီးမှ စတင်ပါ။ သင်ပိုစုဆောင်းနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကို ရှာပါ။
Step 4. Evaluate your asset allocation. ( မင်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို စီစစ်အကဲဖြတ်ပါ။) "You have to createabucket list. You have to learn where to put your money to keep it safe and where to put your money to grow it with some risk," he says. Put your money in different types of investments, such as stocks, bonds, commodities or real estate. Diversify your investments. သင် နောက်ခံအင်အားတစ်ခုဖန်တီးထားပါ။ သင့်ရဲ့ငွေကြေးကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုရမလဲဆိုတာ လေ့လာသင်ယူပါ ပြီး တိုငွေကြေးတွေ ဘယ်လိုမျိုးစွန့်စားချက်တွေဖြင့် တိုးပွားအောင်လုပ်ဆောင်ရမလဲ လေ့လာပါ။ သင့်ရဲ့ငွေကို (စတော့များ ၊ စာချုပ်များ ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ (သို့) အိမ်ခြံမြေငှားရမ်းမှု) စသည်ဖြင့် မတူညီသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ပါ။ သင်ရင်နှီးမြုပ်နှံမှု မျိုးစုံ လုပ်ဆောင်ပါ။
Step 5. Createalifetime income plan. (တစ်သက်တာ ၀င်ငွေရရှိမည့် အစီအစဉ်ကို ဖန်တီးဖော်ဆောင်ပါ…) Make sure you won't run out of income for as long as you live. "Income is all that matters. Assets won't buy your food. They won't let you travel. You have to focus on income. The investment community wants you to think about keeping your money in assets." သင်အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး ငွေကြေးမရှိဘဲ မင်းဘ၀ရပ်တည်လို့မရပါ။ ၀င်ငွေက ကိစ္စရပ်တိုင်းအတွက် အသုံး ၀င်တယ်။ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို အစားအသောက်ဖြင့် ၀ယ်ယူ၍မရ။ ငွေကြေးမပါဘဲ ခရီးထွက်လို့ မရနိုင်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် မင်းရဲ့ ၀င်ငွေက အရေးကြီးတယ်။ သင်ပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အသိုင်းအ၀ိုင်းက လိုချင်တယ်။
Step 6. Invest like the .001%. (၀.၀၁ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရင်နှီးမြုပ်နှံပါ) "That means learn from the very best on earth (Schwab, Icahn, Bogle, Dalio, Forbes and others he interviewed for the book), and what you learn from them apply and you'll achieve financial security faster than you will any other way." ကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံးအရာတွေကို လေ့လာပါ (Schwab, Ichan, Bogle, Dalio, Forbes မဂ္ဂဇင်း နှင့် အခြားသောအရာတွေကို စာအလုပ်အတွက် မေးမြန်းခဲ့တယ်)။ သူတို့ရဲ့ တင်ပြချက်တွေကနေ မင်းဘာတွေရခဲ့လဲ ၊ ဒီလေ့လာချက်တွေက မင်းရဲ့ အခြားသောနည်းလမ်းတွေထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ဘဏ္ဍာရေးတောင့်တင်းခိုင်မာမှုကို ရရှိစေတယ်။
Step 7. Just do it, enjoy it and share it. (ယခုပင်လုပ်ဆောင်ပါ, ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ ၊ ပြန်လည်မျှဝေပါ) Makeacommitment to be wealthy now, not in the future. "Start where you are, and you'll begin to find out that there's more than enough. အနာဂတ်တွင်မဟုတ်ဘဲ ယခုပင်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လုပ်ပါ။ သင်စတင်တဲ့နေရာ နှင့် လိုအပ်တာထက်ပိုသော ရှာဖွေခြင်းမျိုးဖြင့် စတင်ရမည်။
By – Kyaw Lin Lin Htet (www.esmemm.com)